Ingilazi ifakwe ku-iron bolted tank 8.4m Dia. I-21m H. UASB isiqediwe eXuzhou City, China Imininingwane: jane@bsltank.com mob: +8615373670441Funda kabanzi »
Isikhathi seposi: 04-27-2021
Isikhathi seposi: 04-09-2021
Isikhathi Iposi: 04-21-2020
Isikhulu esiphezulu uMnu. ILANGA uzovakashela umbukiso we-11 wokwelashwa kwemfucumfucu eqinile eJarkarta, e-Indonesia NgoJulayi. 17 - 19. Abangani beThemba bazoba nethuba lokuhlangana noMnu Sun eJarkata. Manje ithangi elisha selakhiwe, sethemba ukuthi singabambisana kakhulu ngokuzayo. Funda kabanzi »
Kusukela ngomhla ka-16 kuya ku-18, Okthoba, 2019, umbukiso we-IFAT, e-India. Indawo yombukiso: Hall 1, Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, India C38-Shijiazhuang City Zhaoyang Biogas Equipment Co. Ltd Ikheli: Bombay, Exhibition Centre (BEC) Off Western Express Highway Goregaon (East), Mumbai 40006 Imininingwane ...Funda kabanzi »
Isikhathi seposi: 03-31-2020
Muva nje enye yephrojekthi yethu eXuzhou, eChina - itanerericic digester tank Hight 22.8m, Dia. I-6.11m yayifakiwe. Funda kabanzi »
Amandla e-bio-mass ekuthuthukiseni izwe lethu ukungaqondi kahle kunokuqonda, ubunzima obuningi kunokusekelwa, kodwa ngenxa yobuhle bakhe bemvelo, futhi ekugcineni usuku nosuku ukukhula nokukhula. Ekupheleni kuka-201 ...
4 Ingilazi ehlanganiswe namathangi ensimbi aboshiwe yakhiwe eShanghai, izosetshenziselwa ukwelashwa kwamanzi angcolile. xhumana: Jane@bsltank.com mob: +8615373670441
Ingilazi ifakwe ku-iron bolted tank 8.4m Dia. I-21m H. UASB isiqediwe eXuzhou City, China Imininingwane: jane@bsltank.com mob: +8615373670441
Ithangi lamanzi laseJapan selizophela ...
Iphrojekthi yethu eJapan manje isizophela. Ethintwe yilo bhubhane, ukuthuthuka kwezomnotho namasiko kuzo zonke izingxenye zomhlaba kuvinjelwe ngezinga elithile. Kepha ngokwandiswa kwemigomo ...
Ukukhula Kwemakethe Yezitshalo zeBiogas, Amathrendi, i-COVID ...
INetherlands-I-Dutch City Council ngoLwesithathu ivume inkontileka yokwakha yokwakha i-anaerobic digester esikhungweni sokuhlanza amanzi angcolile se-Dutch Public Works Council. Umshini wokugaya ukudla ...